wararka Diyaarin – Read Somali Newspaper!
Read Somali Newspaper! » wararka Diyaarin
WARARKA MAANTA 25ka Diseembar 2019 Sir Culus!
Su’aallaha Maanta: Maxay Dowladda nabar iyo Naxdin muddo 3 sanno shilin Soomaali u isticmaali karin? Yaa Madaxweyne ka noqon doona #Soomaaliya kadib fashilka 4ta sanno ee Madaxweyne Mudane Farmaajo “Been-Hawaas” Iyo Raysal Wasaare Mudane Mudane Kheyre? Maxay beesha caalamka u diiday inay xukuummadda fashilantay ku darsato 2 sanno oo dheeraad ah? Maxay Dowladda Nabar Iyo Naxdin maalinta Arbacada wax u fulisaa? Yaa dhaca canshuur caasimadda #Muqdisho? Maxay weli wadooyinka/jidadka Muqdisho u xirxiran yihiin? Yaa waddanka #Soomaaliya ka dhigay waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas”?
Boosaaso Diseembar 25, 2019 Faah faahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dil qorsheysnaa oo xalay ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Dilkaan oo ay fuliyeen rag ku hubeysnaa Bistoolado ayaa waxaa loo geystay nabadoon lagu magacaabi jiray Cismaan Axmed Askar, kaas oo si weyn looga yaqiinay degmadaasi.
Nabadoonka ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa afaafka hore hoygiisa oo ku yaalla xaafadda New Boosaaso, sida ay Warbaahinta u xaqiijiyeen ilo deegaanka ah.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in raggii ka dambeeyey dilkiisa ay goobta isaga baxsadeen dhacdada kadib, waxaana Meydka halkaasi ka qaaday dad rayid ah.
Ciidamo ka tirsan kuwa amniga ayaa sidoo kale gaaray meesha ay wax ka dhaceen, balse ma jirto cid ay gacanta ku soo dhigeen.
Muddooyinkii dambe amniga Boosaaso ayaa faraha ka sii baxayey, waxaana ka dhacayey falal liddi ku ah nabad gelyada.
Arrimahaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo weli ay halkeeda tahay xiisada u dhexeysa xukuumadda Puntland ee uu hoggaamiyo Deni iyo waxgaradka
Hiiraan Diseembar 25, 2019 Ugaas Xassan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ka mid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed ayaa maanta munaasabad qado sharaf soo dhaweyn ah ugu sameeyay magaalada Beledweye Guddiga Gurmadka Somaliland ee Fatahaadda oo maalintii shalay magaalada soo gaaray.
Ugaas Xassan ayaa sheegay in guddiga ku soo dhaweynayaan magaalada isaga oo uga mahad celiyay jawaabta ay ka bixiyeen ka qeybqaadayasha Gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynta weyn ku yeesheen Daadadkii dhawaan ku ku fatahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
”Waan ka mahad celineynaa gurmadka aad noo fidiseen iyo is garab taaga aan noo muujinseen, Soomaali waa walaalo, waana Hal, waxaa is weydiin mudan yaa is diidan ma siyaasiyiinta mise Dhaqanka ayuu yiri” Ugaas Xassan oo sheegay in Soomaali marnaba is diidaneyn.
Guddoomiyaha Guddiga Gurmadka Somaliland Jamaal Ceydiid Xassan ayaa dhankiisa uga mahad celiyay Ugaas Xassan kulanka qado sharafta ah ee uu u sameeyay, isaga oo sheegay in tallaabada ay qaadeen aheyd mid waajib ah.
Wafdigan oo maalintii shala ysoo gaaray magaalada ayaa sheegay in lacag dhan $600,000 oo dollar oo ka timid bulshada reer Somaliland u sitaa dadka ay saameynta adag ee dhinaca nolasha ah ku yeesheen Fatahaadihii ugu danbeeyay ee ku dhuftay gobolka gaar ahaan magaalada Beledweyne.
Muqdisho Diseembar 25, 2019 Taliye ku xigeenka Ciidanka xoogga dalka Sareeyo Guuto Maxamed Cali Bariise ayaa booqasho ku tagay Tuulada Xaaji Cali ee gobolka Shabellada dhexe.
Taliyaha ayaa halkaas kula hadlay dhallinyarada macawiisleyda deegaanka ee isu taagay si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Taliyaha oo ay garab taagnaayeen saraakiil kale ayaa sheegay in dowladda federaalka ay garab taagan tahay dhalinyarada Macaawiisleey, isla markaana la qarmeyn doono.
“Awal kaligiin ayaa dagaalami jiray soo maahan, hadda garab ayaad heysataan, waxaadna heli doontaa taageero buuxda oo idinkaga timaado Dowladda Dhexe” ayuu yiri Taliye Bariise.
Sidoo kale, taliye Bariise ayaa amray taliska qeybta 27-aad ee ciidamada Xoogga dalka inay garab siiyaan dhallinyarada Macaawiisleeyda.
“Waxaan amrayaa taliyaha qeybta 27-aad inay garab idiin siiyaan, oo qalabkooda iyo raashiinkooda wax idinka siiyaan inta ay Dowladda Soomaaliya ka diyaarineyso qorshihii lagu qarameyn lahaa” ayuu sii raaciyey.
Taliyaha ayaa ugu dambeyntii ciidamada Macawiisleyda uga mahadceliyey halgankii ay u galeen sidii deegaanadooda ay uga sifeyn lahaayeen Al-Shabaab.
Maamulka Galmudug Diseembar 25, 2019 Hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa si weyn uga horyimid shuruudihii uu xalay soo bandhigay guddiga farsamada maamul u dhisida Galmudug, kuwaas oo la xariiray ka mid noqoshada baarlamaanka.
War ka soo baxay Ahlu Sunna ayaa lagu sheegay in shuruudaha guddiga aysan quseyn 20-ka xubnood ee ay dhowaan soo xushay.
Sidoo kale Ahlu Sunna ayaa shaacisay inay xor u tahay xubnaha laga siiyey baarlamaanka labaad ee Galmudug, taasina ay ku cadahay heshiiskii ay la gashay dowladda federaalka oo uu garwadeen ka ahaa Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Qoraalka ka soo baxay Ahlu Sunna ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga doorashada Galmudug ee ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya aysan weli aqoonsaneyn, islamarkaana aysan ku laheyn wax matalaad ah.
Ugu dambeyn waxa ay Ahlu Sunna ugu baaqday dowladda dhexe inay ilaaliso heshiiska labada dhinac, iyada oo tilmaamtay in dhankeeda ay sidiisii u fulisay.
Arrintaan ayaa ku soo beegmeysa, iyadoo xalay guddiga farsamada uu soo saaray 11 qodob oo laga doonayo qofka noqonaya Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, iyadoo qodobadaasi ay saamaynayan dhammaan 89-ka Xildhibaan ee Baarlamaanka Galmudug.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxaa haatan ka socota soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka cusub Galmudug, waxaana sharuudahan la soo saaray, xilli aanay horey u kala cadayn qofka noqon kara Mudane Baarlamaanka Galmudug
Muqdisho Diseembar 25, 2019 Waxaa soo ifbaxaya khilaaf iyo xiisad bilow ah oo ka dhex oogan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in uusan la dhacsaneen dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ee uu dalka ka wado James Swan.
Swan ayaa si xowli ah u wada wadatashayada ku aadan nuuca doorasho ee dalka ka dhici karto, isagoo la qaadanaya masuuliyiinta maamul gobaleedyada, xisbiyada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka, kuwaas oo dhamaantood aan ku aragti aheyn Madaxweyne Farmaajo.
Kulan ka dhacay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa looga hadlay wadatashiyada James Swan iyo saameynta ay ku yeelan karto rabitaanka nuuca doorasho ee dalka ka dhacaysa ee uu doonayo madaxweyne Farmaajo, waxaana la sheegay in arintaasi ay muhiim tahay in lagala hadlo Swan.
Swan ayaa la kumay ra’iisul wasaaraha, afhayeenada baarlamanka, madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda xisbiyada, balse weli lama kulmin madaxweynaha, waxaana la sheegay in madaxweynaha uu ka meer-meerayo kulanka.
Farmaajo ayaa rumeysan in dalka ay maamusho dowladda, ayna tahay inay ayaga go’aan ka gaaraan doorashada, halak Swan uu rumeysan yahay in talada dalka ay wada leeyihiin dowladda, mucaaradka iyo maamul goboleedyada.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo koox kale oo ku xiran Xafiiska madaxweynaha ayaa doonaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, oo aysan dadka oo dhan ka qeyb-gelin balse tiro yar oo dadka oo dhan wakiilka ka noqonaya, la iskuna keenayo Muqdisho.
Dhinaca kale, Xisbiyada, madaxda Maamul Gobaleedyada, Baarlamaanka iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa qaba in aysan suurtagal in dhowr kun ay ka wakil noqdaan dhowr milyan, sidaas darteedna maadaama aan dalka oo dhan doorasho qof iyo cod ah laga hir-gelin karin, ay tahay in la helo nidaam kale.
Su’aasha taagan ayaa ah James Swan ma mari doonaa wadadii Nicholas Heysom oo ah wakiilkii ka horeeyay?
Muqdisho Diseembar 25, 2019 Caadiyan madaxda Soomaalida ayaa siyaasada ku kala fogaada markii uu soo dhawyahay waqtiga kala guurka, waxaana hada soo if baxaya khilaaf dhowrkii bil ee ugu dambeysay la hadal hayay, kaas oo u dhaxeeyo mas’uuliyiinta Soomaaliya.
Madaxda ayaa isku khilaafsan nooca doorashada dalka ka dhaceysa 2020 iyo habka loo wajahayo, waxaana ay tani horseeday in laba dhinac kala noqdaan, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Caasimada Online.
Khilaafkan ma ahan mid shaqada kale ee dowladda saameyn ku leh, wuxuuna ku kooban yahay kaliya arrinta doorashooyinka.
Warar ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal, ku-xigeenkiisa Cabdi Weli Muudey, iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali ay isku dhinac yihiin.